Isiokwu slide Manufacturers & Suppliers - China Isiokwu slide Factory
35mm Automatic eweli Extension Iri Isiokwu slide
Anyị 35mm Automatic Lifting Extension Dining Table slide mere site na igwe nkenke igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
35mm Twozọ abụọ ndọtị dinning table slide enweghị mmekọrịta
Okwu Mmalite:Anyị 35mm wayzọ abụọ ndọtị dinning table slide enweghị mmekọrịta mere site elu nkenke igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
35mm Ugboro abụọ ndọtị mmekọrịta dinning table slide na mkpọchi
Okwu Mmalite:Anyị 35mm Ugboro abụọ ndọtị mmekọrịta dinning table slide na mkpọchi mere site elu nkenke igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
35mm Bilie & Fall telescopic tebụl ndọtị slide
Okwu Mmalite:Anyị 35mm Bilie & Fall telescopic tebụl ndọtị slide mere site na oke nkenke igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Obosara 48mm telescopic ọwa slide maka abụọ ndọtị dinning tebụl
Okwu Mmalite:Anyị Obosara 48mm telescopic ọwa slide maka abụọ ndọtị dinning tebụl mere site na elu kpọmkwem igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
48mm Single ụzọ table ndọtị slide
48mm telescopic bọl agba table ndọtị slide
Okwu Mmalite:Ihe ngosi 48mm telescopic na-ebu tebụl ndọtị nke nnukwu nkenke igwe mere. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
YA-4804 Ugboro abụọ oche telescopic ọwa tebụl ndọtị slide
Okwu Mmalite:Anyị YA-4804 Double-oche telescopic ọwa tebụl ndọtị slide mere elu nkenke igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Multi Nkebi ịkpakọba Isiokwu slide (ndọtị table usoro)
Okwu Mmalite:Anyị Multi Nkebi ịkpakọba Isiokwu slide (ndọtị table usoro) mere site elu kpọmkwem igwe. Anyị nwere obosara 35mm na 48mm abụọ dị iche iche nke tebụl ndọtị slides. Anyị nwere ike ịhazigharị ndị na - agba ọsọ na tebụl maka okpokoro gị dịka atụmatụ tebụl gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndọtị okpokoro ndọtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.